Salpicadas - スペイン語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: salpicadas (スペイン語 - ビルマ語)
ယနေ့သိုးစု၊ ဆိတ်စုတရှောက်လုံးကို ကျွန်ုပ် သွား၍၊ ပြောက်ကျား သောဆိတ်များ ညိုသော သိုးများ၊ ရှိသမျှတို့ကိုရွေးနှုတ်ခွဲထားပါမည်။ နောက်မှ ပြောက်ကျားသောဆိတ်၊ ညိုသောသိုးတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ အခ ဖြစ်စေလော့။
အဖြူပါသော ဆိတ်ရှိသမျှတို့နှင့်၊ အဆင်းညို သော သိုးရှိသမျှတို့ကိုရွေး၍၊ မိမိသားတို့လက်သို့ အပ်ပေး လေ၏။
သို့ဖြစ်၍၊ နောင်ကာလ၌ ကျွန်ုပ်၏အခသည်၊ အဘရှေ့သို့ ရောက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း သည် ကျွန်ုပ်ကို စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မည်။ မပြောက် မကျားသော ဆိတ်၊ မညိုသောသိုး ရှိသမျှတို့ကို၊ ကျွန်ုပ်ခိုး သော အကောင်ဟူ၍ မှတ်စေလော့ဟု ဆိုလေ၏။
Las ovejas se apareaban delante de las varas, y después parían corderos listados, pintados y salpicados de diversos colores
သိုးဆိတ်တို့သည် တံဖျာများရှေ့မှာ ရှက်တင်၍၊ အပြောက်အကျား စသည်တို့ကို ဘွားကြ၏။
Todo lo que toque su carne será santificado. Si su sangre salpica en el vestido, lavarás en un lugar santo aquello sobre lo cual haya salpicado
ထိုအသားကို ထိသမျှသည် သန့်ရှင်း၏။ အသွေးဖြန်းသမျှသော အဝတ်တို့ကို သန့်ရှင်းရာဌာန၌ လျော်ရမည်။
ddifyr (ウェールズ語>英語)likvärdigheten (スウェーデン語>英語)endurecidas (スペイン語>ビルマ語)obrigada meu querido (ポルトガル語>英語)kropsbevægelser (デンマーク語>ブルガリア語)du arbejder sent (デンマーク語>ルーマニア語)ad tempore (ラテン語>フランス語)kara sevda (トルコ語>オランダ語)подготовлена (ロシア語>英語)utak ng baboy (タガログ語>英語)descentd(フランス語>英語)matulog kana ulit (タガログ語>英語)regulerbar (デンマーク語>ギリシア語)away bate (タガログ語>英語)economie (英語>ポーランド語)aap ignore kyu kar rahe ho muje? (ヒンズー語>英語)mi marido tiene familia (スペイン語>英語)voedselbureaus (オランダ語>英語)bella niña (スペイン語>英語)brno (デンマーク語>イタリア語)hiruharama (マオリ語>バスク語)bhook lagi hai (ヒンズー語>英語)comfio (カタロニア語>スペイン語)alice (フィンランド語>スロバキア語)gewindestift (ドイツ語>英語)